कम्प्युटरको Desktop Freeze भयो भने के गर्ने ?
कम्प्युटर चलाऊदा चलाऊदै अचानक Desktop Freeze भयो अथवा कुनै प्रोग्राम close गर्न खोज्दा taskbar disappear भयो केही काम गरेन भने तपाईं के गर्नु हुन्छ ? अन्तिम उपाय कम्प्युटरलाई Restart गर्नु हुन्छ होला , तर यस्तो अवस्थामा कम्प्युटरलाई restart नै गर्नु पर्ने हैन । यो त मात्र explorer ले responding नगरेर हो र यो समस्याको समाधान पनि सजिलो छ ।
१) कम्प्युटरको Task Manager खोल्नुहोस् त्यस्को लागि Ctrl+Alt+Delete कि प्रेस गर्नुहोस् ।
२) Processes tab मा जानुहोस् र त्यहा explorer.exe कहाँ निर छ हेर्नुहोस् ।
३) explorer.exe लाई highlight(क्लिक)गरी End Process बटन प्रेस गर्नुहोस् ।
४) अब फेरी Applications Tab मा जानुहोस् र New Task बटनमा प्रेस गर्नुहोस् ।
५) त्यहाँ explorer.exe टाईप गर्नुहोस् र ओके गर्नुहोस् ।
तपाईंको Desktop केही सेकेण्डमै reappear हुनेछ ।
लेखक: दिपक भट्टराई बाट 4:53 PM